आज बजार मा चिकन खरीद - मजा एकदम महंगा। को incubator मा - त्यसैले, निजी परिवारमा थुप्रै मालिक आफ्नै बचेराहरूलाई उठाउन गर्न रुचाउँदैनन्। बिक्री को लागि यस्तो उपकरण ब्रान्डहरु, त्यहाँ धेरै छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय आज को एक इन्क्यूबेटरों "ब्लिट्ज" छ। एकदम सरल, र hatchability को प्रयोगको लागि निर्देशन राखे सबै अन्डा को बारेमा 98% छ।
उपकरण को विभिन्न
आज बजार मा तपाईं इन्क्यूबेटरों "ब्लिट्ज", अन्डा एक फरक नम्बर लागि डिजाइन विभिन्न मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यस मामला मा रुचि प्रदर्शन मानिन्छ कति बचेराहरूलाई मा निर्भर गर्दछ। Incubator "ब्लिट्ज Norma", उदाहरणका लागि, 72 चिकन अन्डा लागि डिजाइन गरिएको छ। "आधार" मोडेल अलि फरक डिजाइन छ। यो 520 अन्डा एक बुकमार्क अप लागि डिजाइन गरिएको छ। 48, 72, 120. तिनीहरूले अन्डा को उपयुक्त नम्बर (48, 72, 120) को लागि डिजाइन: वहाँ मोडेल, लेबल संख्या पनि छन्। डिजाइन इन्क्यूबेटरों यी मोडेलहरू "ब्लिट्ज Norma" गर्न समान छन्।
को incubator कसरी "ब्लिट्ज आधार"
Structurally, यो संशोधन को एकाइ एक दराज बरु ठाडो जस्तो। प्रत्येक अन्य को भित्र पाँच जाल ट्रे छन्। तिनीहरूलाई 45 डिग्री घुमाउन। स्वतः। को कोठरी दुई प्रशंसक तल र स्प्रेयर मा निर्माण गरिएको छ। अगाडि ढोका उच्च पारदर्शिता प्लास्टिक सामाग्री बनेको छ। प्याकेज विशेष बाल्टिन र एक नली एउटा सानो पंप समावेश छ।
नेटवर्क स्क्रिन संग सुविधाजनक प्यानल मार्फत incubator "ब्लिट्ज आधार" द्वारा व्यवस्थित। डिजिटल प्रदर्शन मा कैबिनेट तापमान र चिस्यान भित्र स्थापित मूल्य देखाउँछ। को कोठामा भित्र microclimate समायोजन गर्न समर्पित बटन छन्।
विधानसभा निर्देशन "ब्लिट्ज आधार"
बुझाइएको इन्क्यूबेटरों यो संशोधन तखतालाई। तपाईं खरीद पछि infield मालिक बनाउन आवश्यक सबै, यसलाई फोम को ताला थाली, को चटाई अन्तर्गत पुल अगाडि ढोका, खुट्टा को ह्यान्डल प्रतिस्थापन र विसारक माउन्ट छ। तपाईं पनि कोठामा मा पानी आपूर्ति पम्प जडान गर्न आवश्यक हुनेछ।
हतियार र खुट्टा बस प्रदान गरिन्छ कि स्क्रू संग उपयुक्त ठाउँमा स्क्रूड। को विसारक पत्र "एल" पातलो धातु प्लेट को आकार मा घुमेको छ। यो प्रशंसक अगाडि चटाई-सुत्ने र कैबिनेट को फेदमा स्प्रेयर चुच्चो को कोष्ठक अन्तर्गत सम्मिलित हुनुपर्छ।
को चुच्चो पानी आपूर्ति नली incubator पछाडि पक्ष संग स्प्रेयर जोडिएको छ (छेद मा) र विशेष प्लास्टिक टोपी राखिन्छ। थप पंप नली को दोस्रो अन्त गर्न जोडिएको बाल्टिन पाइप (बाहिर) को लागि निश्चित छ।
तिनीहरूले incubator "ब्लिट्ज आधार" सामान्य तरिकाले मा अन्डा। पहिले कैबिनेट हटाइएको ट्रे मेष। मात्र सर्त पूरा हुनुपर्छ भनेर - तिनीहरूले स्थित तल तेज अन्त र सबैभन्दा बाक्लो हुनुपर्छ छन् भन्ने छ। अण्डा बीच बाँकी voids फोम, गत्ता वा फोम को टुक्रा भरिएको हुनुपर्छ। तपाईं छैन भने, पालैपालो तिनीहरूले बाहिर रोल र तोड गर्न सक्नुहुन्छ। निम्न अनुक्रम मा उत्पादन ट्याब:
कैबिनेट मध्य ट्रे छ।
तल्लो र माथिल्लो राख्नुभयो।
चौथो र दोस्रो सेट गर्नुहोस्।
को incubator पूर्णतया लोड छैन भने, कुनै पनि मामला मा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो घुमाउँदा संयन्त्र गर्न क्षति हुन सक्छ।
निम्नानुसार स्वचालित incubator "ब्लिट्ज आधार" द्वारा व्यवस्थित:
, कैबिनेट भित्र microclimate समायोजन साथ दुई "+" र प्रेस गर्न "-" र5सेकेन्डको लागि तिनीहरूलाई पकड। तापमान र आर्द्रता "+", कमी थिचेर वृद्धि छ - "-" यो थिचेर।
को ताप तत्व बन्द गर्न रातो सर्कल संग एउटा बटन छ। यो प्रेस र5सेकेन्डको लागि होल्ड गर्न आवश्यक छ। डिजिटल प्रदर्शन मा हीटर बन्द स्विच पछि चरम बिन्दु रङमा पिल पिल रोक्छ।
बटन घुमाउँदै मा उत्तेजित गर्दछ र नियन्त्रण एकाइ बायाँ बन्द। दायाँ-असक्षम अलार्म सेट मापदण्डहरू तलको तापमान खस्छ गर्दा ट्रिगर।
इन्क्यूबेटरों "ब्लिट्ज": समीक्षा
घरेलू जमीन जायदाद को मालिक यो संशोधन को उपकरण बारेमा राय धेरै राम्रो विकास भएको छ। तापमान र चिस्यान इन्क्यूबेटरों "ब्लिट्ज आधार" धेरै राम्रो तरिकाले राखिएको। यी मापदण्डहरू धेरै सरल रूपमा समायोजन गर्नुहोस्। पनि जब कि वास्तवमा जस्तै धेरै कुखुरा किसानहरु एक शक्ति आउटएज incubator "ब्लिट्ज" स्वतः ब्याट्री सञ्चालन गर्न स्विच।
यो मोडेल को केही बेफाइदा ट्रे खोल्दै प्रक्रिया मा अन्डा ल्याइने मात्र संभावना मानिन्छ। तर, यो बेफाइदा भन्दा अझै बढी लाभ छ जो सिर्फ एक विशेष संरचना छ। अण्डा यस पालो कुनै पनि यांत्रिक तनाव subjected छैन।
"ब्लिट्ज Norma" प्रयोग को लागि निर्देशन
इन्क्यूबेटरों यो संशोधन (चिन्ह लगाइएको 48, 72, 120 जस्तै संख्या) फोम गर्मी-पृथक पर्खालहरु संग पारंपरिक काठ बक्से छन्। यी उपकरणहरू बगैचा सानो जायदाद मा कोरलिँदै लागि आदर्श हो। यस्तो incubator, "ब्लिट्ज Norma", निम्नानुसार रूपमा उपकरण को प्रयोगको लागि निर्देशन:
बक्स तल दुई लामो धातु ट्रे संग सुसज्जित छ।
पानी एक नली-विस्तार संग एक सोली मार्फत तिनीहरूलाई पहिल्यै वा स्थापना पछि मा हालिएको गर्न सकिन्छ।
अन्डा एक 45 डिग्री कोण मा माउन्ट मा राखिएको छन्। ट्रे। को "ब्लिट्ज आधार" को मामला मा जस्तै, तिनीहरूलाई ठिक अन्त तल र प्रत्येक अन्य ज्यादा देखि ज्यादा तंग हुन व्यवस्था।
पुस्तकचिनो incubator पछि पारदर्शी आवरण बंद र नेटवर्क मा समावेश गरिएको छ।
तापमान समायोजन लीवर, यो "6" सेट गर्नुपर्छ। परिवर्तन मापन अन्य संख्या यो बदलाव गर्न सक्नुहुन्छ।
परिक्रमा र ताप तत्व को संयन्त्र लीवर बटन गर्न / बन्द आसन्न मा गर्न सकिन्छ।
चिस्यान बक्समा को पछिल्लो भाग मा विशेष स्लाइड प्लेट द्वारा नियमन छ। माथिको graduations संग सूचक मापन टाँसियो छ। को मार्क 40, 55, 65, 85 र यति मा। डी मा प्लेट अग्रिम, को कोठामा भित्र उपयुक्त चिस्यान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्याट्रि नियन्त्रण एकाइ मा तापमान स्विच नजिकै अवस्थित विशेष टर्मिनलहरु जोडिएको छ। गर्न माइनस - रातो तार सकारात्मक, कालो जोडिएको छ।
"ब्लिट्ज" अन्डा यो संशोधन लागि समीक्षा incubator, निजी परिवारमा को मालिक पनि धेरै राम्रो कमाए। Fanciers इन्क्यूबेटरों कसरी उच्च hatchability "ब्लिट्ज Norma" र व्यवस्थापन सजिलो भन्छन्। धेरै मानिसहरू सँगै यस्तो मोडेल धमकी दिन को निकासी लागि विशेष ट्रे छ कि, वास्तवमा सकारात्मक विचार गर्नुहोस्। Bumpers ग्रिडको देखि र समितिबाट भेट गरेका थिए। तसर्थ, hatched बचेराहरूलाई को incubator फस्न सक्दैन।
Legbary (नस्ल कुखुरा): वर्णन, विशेषताहरु र हेरविचार को सुविधाहरू
कद्दू झाडी खुला क्षेत्र को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू: विवरण, फोटो
टमाटर Diabolik F1: समीक्षा, विविधता को विवरण, फोटो
Zucchini। खेती र हेरविचार - तपाईं जान्नु आवश्यक सबै ovoschevodu
अजवाइन आहार: दुई हप्तामा सात किलो
अवरुद्ध सम्पर्क: किन र के गर्न?
कपालमा स्टाइलिश कपाल पसलहरू आफ्नै हातका कंधेहरूमा
वजन लागि तोरी wraps
तपाईं मानिसहरूलाई नदी कसरी असर सोचेको?
प्यानल घरमा शौचालय को मरम्मत। व्यावहारिक सुझावहरू